#BlogIndiana: Jason ရေတံခွန်၊ ဘလော့ဂါများနှင့် Google နတ်ဘုရားများ Martech Zone
ဒါဟာယနေ့အကြီးအစတင်ခဲ့သည် Indiana Blogနှင့် ဂျေဆန်ရေတံခွန် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ ghostblogging နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဘလော့ဂါများအားစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသည်ကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်စီးဆင်းနေသောအရည်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဂျေဆန်၏အဓိကအချက်မှာပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီးစေ့စပ်သေချာသည်။ သို့သော်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏ craw တွင်တွယ်ကပ်နေသောအရာများဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကကျွန်မရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံစားမိတယ်။ ပြီးတော့ငါခံစားခဲ့ရတယ် နှစ် ချစ်သူ ငါ့နောက်မှာထိုင်နေတာငါသူတို့တွေးနေတာကိုငါသိတယ်သေချာတယ်!
ငါ Jason နှင့် 100% သဘောတူ! စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး Alexander Graham Bell သည်သူတို့တီထွင်ပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်တွင်ဖုန်းများမည်သို့အသုံးပြုရမည့်အကြောင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်တူသည်။ Blogosphere သည်နုပျိုနေသေးပြီးသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးသောအရာများသည်အခြားသူများအတွက်အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများသည်ကျွန်ုပ်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည် လူမှုမီဒီယာတည်ရှိသည် နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမုသာဖြစ်ကြသည်။
ငါတို့မှာစည်းမျဉ်းတွေမရှိဘူး။ ငါတို့မှာဘာရှိသလဲဆိုတာကိုကြားခံအတွေ့အကြုံတချို့ရှိတယ်၊ ဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုတာကအသိပညာဗဟုသုတကိုအခြားသူတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဂျေဆန်ကရှာဖွေရေးကိုစိတ်မပူပါနဲ့လို့ Chris Baggott ထိုင်ခုံမှထွက်လာသည်။ သူက“ လူတွေကိုမင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ရှာဖွေမှုမှာမတွေ့ရခြင်းအားဖြင့်လူတွေကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်လား” ဟုတူညီသောအရည်ရွှမ်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုသူမေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်ဂျေဆန်ဒါမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး
BTW: ဤသည်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုအားလုံးမဟုတ်ပါ။ ဂျေဆန်သည်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုသည့်အကြောင်းအလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာခဲ့သည်။ သို့သော်ခရစ်၏မေးခွန်းမှာမှန်ကန်သောအချက်ကိုပေါ်ပေါက်စေသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရှာဖွေသူတွေကသင့်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကသင့်ကိုမတွေ့ရင်ပြ,နာမဟုတ်လား။
ကျွန်ုပ်၏အဖြေမှာ၎င်းသည်သင်၏ပြproblemနာဖြစ်သည်။ လူတွေကသူတို့ရဲ့ site နဲ့ content တွေကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလူတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ tools တွေအားလုံးကို Google ကပေးတဲ့အတွက်အလွန်ရက်ရောပါတယ်။ ဂူးဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်ကိုသော့ချက်စာလုံးများသို့မဟုတ်စကားစုများဖြင့်ပင်ထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ ထိုသော့ချက်စာလုံးများတွင်ရှာဖွေမှုများကဤပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်လိုသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
အခြားဘုရားတွေလိုပဲဂူဂဲလ်နတ်ဘုရားတွေကစားတာကိုငါမုန်းတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားနိုင်မည်ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာတွင်သော့ချက်စာလုံးများ၊ ပြောရလျှင်ဝေါဟာရများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများပေါင်းစပ်ဖော်ပြခြင်းများကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအဖြေများကိုရှာဖွေနေသောလူများသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့လုပ်တဲ့သူတို့ကိုရှာပါ။
ဒါဟာအားလုံးအလားအလာနှင့်ပတ်သက်။ ! Social Media Explorer ကကောင်းကောင်းလုပ်သလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဂျေဆန်သည်သူ၏ဘလော့ဂ်မှဆွေးနွေးမှုများနှင့်ပြောဆိုမှုများကိုရရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ သို့သော်ဂျေဆန်အနေဖြင့်သူ၏ဘလော့ဂ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်အသွားအလာနှင့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအသစ်များပိုမိုရရှိရန်အလားအလာရှိသည်။ ငါသဘာဝမဟုတ်သောစကားပြောရန်မတိုက်တွန်းပါ - သော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုအချို့ကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီးရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းကိုဆွဲဆောင်သည်။ ရိုးရှင်းသော SEO အတွက် blogging.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်အနည်းငယ်ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ဂျေဆန်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနယ်ပယ်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပို၍ အလုပ်များနေသည်။ သူကထူးချွန်တဲ့တင်ဆက်သူ (ငါအခုထိသင်ယူနေဆဲ) နှင့်ဖျော်ဖြေရေးဟောပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ ထိုက်တန်ပါတယ် ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု။ ငါအခွင့်အလမ်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်သူ၏ဘလော့ဂ်၏အလားအလာကိုထိခိုက်စေသည်ဟုသူထင်သည်။
မှတ်ချက်: ငါဂျေဆန်ကိုစေလွှတ်။ , ငါ့ eBook အသစ် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သူစိတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ 🙂
Ghostblogging တစ် Noble အလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါတယ်
မင်းရဲ့သူဌေးကသူတို့အလုပ်အတွက်ရာထူးတိုးမြှင့်တာကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲ။ လှေကားတက်ရင်းသင်ထိုင်နေသလား ဒါမှမဟုတ်သင်အဲဒီမှာထည့်ဖို့သင်ကူညီပေးလိုက်တာကိုသင်အနည်းငယ်အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သလား။ ဒါ Ghostblogger တွေ do။ Ghostblogging သည်ညစ်ပတ်သောစကားမဟုတ်သကဲ့သို့ညစ်ပတ်သောအလုပ်လည်းမဟုတ်ပါ၊ Ghostblogger တစ်ယောက်သည်အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းတို့ကိုယ်စားရေးသားချက်များကိုတိကျစွာရေးသည်။
အဲဒါအတုလား ဒါပွင့်လင်းလား? အဲဒါမယုံဘူး! ငါထိုင်ပြီးမင်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအားလုံးကိုရေးခဲ့ပေမဲ့ငါနှစ် ဦး စလုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးဖျော်ဖြေမှုတွေရေးခဲ့ရင်အဲဒါကမင်းကိုလူတစ်ယောက်မဖြစ်စေခဲ့တာလား။ ဘလော့ဂ်လောကတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုမရေးသော BIG အမည်များရှိသည် - ငါသတင်းကိုမင်းမကြားချင်ဘူး!
နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အားဘလော့ဂ်ပို့စ်များကို၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြသည် သင့်စာလွှာအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကစာရိုက်လိုက်တာကိုဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်မှာလဲ။ မင်းသိလား အိုဘားမား၏ဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းကိုအသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်အဖြူကောင်လေးတစ်ယောက် Starbucks မှရေးသားခဲ့သည်? ဒါကအိုဘားမားရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေသလား။ သူအတုလား ဒါကပွင့်လင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးလား
အဲဒီလိုမထင်ဘူး၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့မိန့်ခွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ အိုဘားမားကသူပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုဆိုလိုတာကိုငါသံသယမရှိဘူး!
Tags: စီးပွားရေးရလဒ်များအီးမေးလ်လုံခြုံရေးစျေးကွက်စားနပ်ရိက္ခာမှာယူမှုမိုဘိုင်း application ဆောက်ကြိုတင်မှာယူမှုများ
သြဂုတ် 14, 2009 မှာ 4: 35 AM
ယနေ့နံနက် #blogindiana တွင် Jason Falls မှအားပေးသောဖော်ရွေသောဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရှိနေဆဲမှာ Jason နှင့် Chris ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ငါကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြန်တတ်ယုံကြည်ပါတယ်။ အကယ်၍ Jason သည်ရှာဖွေမှုကိုဂရုမစိုက်ပါက၎င်းသည်သူအတွက်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ပါ။ သူကသူ့ကိုဘယ်သူရှာမလဲဆိုတာဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်၊ သူဟာမနာလိုဝန်တိုစိတ်မဟုတ်ဘူး၊ သင်အပါအ ၀ င်အခြားဘလော့ဂါများ၊ ခရစ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် (သို့) ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များသည် SEO အတွက်ဂိမ်းအတွက်ဘလော့ဂ်၏စွမ်းအားကိုအသုံးချလိုလျှင်။ ဆွေးနွေးမှုကိုစီးဆင်းနေစေ၊ စကားပြောဆိုမှုနှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သူများထံမှသင်ယူခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
သြဂုတ် 14, 2009 မှာ 10: 29 AM
Doug အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာပြောခဲ့သည်။ ဂျေဆန်သည်ထိုကဲ့သို့သောစဉ်းစားဟန်ဖြင့်ဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်သူ၏လမ်းစဉ်အမှားများကိုတွေ့လိမ့်မည်သေချာသည်။ SEO အတွက် blogging နှင့် ghostblogging တို့တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဥပမာများကိုသူစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ငါတို့သဘောတူမယ်၊ ၎င်းသည်ထိရောက်သော၊ လိုက်စားရန်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာကြော်ငြာများကို Peter Francis သင်သိသောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ကျနော်တို့မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်။
14:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 28
မြန်မြန်ဆန်ဆန်သမိုင်းမှတ်တမ်းနှစ်ခု ... ဘဲလ်သည်ဖုန်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ဟူသောစာအုပ်ကိုမရေးခဲ့သော်လည်းသူ၏ကုမ္ပဏီနှင့် Western Union တို့အကြားကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြု၍ မရကြောင်းသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်သည်ခရီးဝေးသွားသောမိန့်ခွန်းကိုလက်တွေ့ကျကျပြုလုပ်သောကာဗွန်ခလုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း (မိုက်ခရိုဖုန်း) ကိုမတီထွင်မှီတိုင်အောင်ကောင်းသည်။ သမ္မတမိန့်ခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အက်ဒီဆန်သည် ၁၈၆၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ အေပီသတင်းစာမှ Associated Press အားလုံး ၀ ပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီးနောက်တွင်စာနယ်ဇင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်လေ့လာခဲ့သည်။ ghostblogger တွေကသူတို့ရဲ့သူဌေးကိုတကယ်တမ်းထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးသရွေ့သူဌေးကတိုင်တန်းမှာမဟုတ်ဘူး။
16:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 46
သတင်းအချက်အလက် Overload အကြောင်းပြောဆို! ဟားဟား။
သမ္မတအင်ဒရူးဂျွန်ဆင်၏စာဖတ်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ သူသည်အများသုံးစကားပြောစွမ်းရည်၏ကောင်းကျိုးများကိုဆက်လက်တွေးတောနေစဉ်ခဏခဏအိပ်မရနိုင်ပါ။ TY သူ Mike, သောမတ်စ်အယ်လ်ဗာသည်ဂျွန်ဆင်၏နှုတ်ထွက်စကားပြောနောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်တွင်ရှိနေမည်ဟုတွေးမိမည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ပါ။
ဒီနေ့၏ဘာသာရပ်မှရှေ့ဆက်ခုန်; မှတ်သားထိုက်သူအားလုံးသည်သူတို့၏အများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းစကားအများစုကိုအချို့သောပုံစံများဖြင့် outsourced လုပ်သည်ဟုထင်မြင်သင့်သည်မဟုတ်လော။ Ghostwriting ကိုသမ္မတဂျွန်ဆင်၏ခေတ်တွင်တည်ရှိခဲ့သော်လည်းယခုမည်သည့်အချိန်တွင်မွေးဖွားသည်ကိုမည်သူကအတိအကျသိသနည်း။
ကျွန်ုပ်သည်ဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းတစ်ခုဖြင့်ချန်လှပ်ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏တကယ့်စာရေးဆရာ (များ) ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင် (သို့) ယေရှုဖြစ်သည်ဟုမထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို“ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်” အဖြစ်လက်ခံသည်။ ကောင်းကင်၌ IN GHOSTWRITER "S ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသူများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့်ကပင်အလုပ်ခွင်တွင်ရှိနေသည်။
ငါ Karr Ghostwriter ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ lol ပေးဆောင်အဖြစ်ပေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ အံ့သြစတင်နေပြီအဖြစ်ငါယနေ့ညအလွယ်တကူအိပ်ပျော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
18:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 04
ghostblogging သည်မြင့်မြတ်သောအလုပ်ဖြစ်သော်လည်းဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူသည်မြင့်မြတ်သောအရာမဟုတ်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့သူသည်စာဖတ်သူများအပေါ်မရိုးသားပါ။
19:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 00
ဂရိတ် post ကို Doug ။ ငါဒီကိစ္စကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားနေတယ်။ တကယ်တော့ငါကအခြားနေ့ကအကြောင်း post ရေးသားခဲ့သည် လူမှုရေးနှင့်ရှာဖွေရေးအရေးပါမှုအကြားဆက်ဆံရေး။
ငါ Indiana ဘလော့ဂ်မှာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီစကားပြောဆိုမှုအတွက်ငါဘာဘောင်မှမရှိဘူး။ ငါရှာဖွေရေးမြင်ကွင်းကယ့်ကိုတကယ်အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါထင်တာကတော့ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှာဖွေရေးမြင်သာမှုရဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက် ၃ ချက်ရှိတယ်။
ပထမမှာအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ blog သည်ပို့စ် ၁၀၀ ကျော်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်အသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုးအတွက်ရှာဖွေမှုအမြောက်အများကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ သင်တစ်ထောင်ကျော်ဖြင့်သင်မည်မျှရှာဖွေနိုင်မည်ကိုသာပုံဖော်နိုင်သည်။
ဒုတိယတစ်ခုမှာအတွင်းပိုင်းကောင်းမွန်မှုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ပို့စ်များကိုဂူဂဲလ်မှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်မင်းရဲ့ URL Permalinks, title tags, header tags နဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးမှာမင်းရဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေပါအောင်သေချာအောင်လုပ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။ ငါအခြေခံအခြေခံကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့တော်တော်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
တတိယအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ link တွေဖြစ်တယ်။ ငါမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကို social media sites တွေပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်းဟာ FAR ကလူတွေကိုသင့်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလို့ယုံကြည်တယ်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ဘာလို့ Google ကိုမင်းကိုရှာမတွေ့တာလဲ။
ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့မင်းရဲ့လူမှုရေးတည်ရှိမှုအပေါ်စွမ်းအင်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ခြင်း၊ ဘလော့ဂါများကလေးစားမှုရရှိခြင်း၊ အချိတ်အဆက်များမှတစ်ဆင့်အခွင့်အာဏာရရှိခြင်းကိုပိုမိုအာရုံပြုခြင်းသည်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ရေရှည်မှာသင့်ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
လူတွေကမင်းဘလော့ဂ်လုပ်သင့်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်အတိုင်းလုပ်တာကရှာဖွေခြင်းကိုရခြင်းပါပဲ။ သင်၏လူမှုရေးမဟာဗျူဟာကိုအလေးအနက်ထားရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်သာယုံကြည်ရမည်။ သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုပြီးသင် blog အများကြီးရေးသည်ဆိုပါကသင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေရှာဖွေမှုများစွာအနိုင်ရလိမ့်မည်။
Ghostblogging ဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလား။ သေချာတာပေါ့! အရွယ်မှာလား? မဟုတ်ပါ၊ သင် ghostblogging agency ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း မှလွဲ၍ မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ပါက၊ သင်သည်ဤမျှလောက်အလုပ်များစွာလုပ်နိုင်သဖြင့်ငွေရှာရုံသာဖြစ်သည်။